Nhau - Chinyakare Chinese Mushonga Scorpion
Scorpion ndeyePinggan Xifeng mushonga, uyo unopinza mukuravira, wakapfava mune zvakasikwa, zvine chepfu uye ndewechiropa meridian. Iyo ine mhedzisiro yekubvisa mhepo uye kupaza, kudhirowa macolorata uye kudzikamisa marwadzo, kurwisa chepfu nekuparadzira pfumo. Scorpion mushonga wakakosha wemhepo yekunze. Inowanzoshandiswa mukurohwa, kuputika, tetanus, Bi syndrome, inogona kushandiswa kune carbuncle, tuberculosis, nyoka inoruma.
Scorpion ine basa re "kudzikamisa mhepo uye kubvisa spasm, anti kuzvimba uye kurwisa chepfu, kucheka makorari uye kubvisa marwadzo"; inowanzo shandiswa "kuumburuka kwevana, kugwinha, chirwere cheganda, zvemwoyo uye chirwere checebrovascular, kuzvimba, hepatitis B, bundu" uye zvimwe zvirwere. Scorpion zvakare iri mhando yepamusoro-giredhi inonaka. Scorpion yakapfuma mukudya zvinovaka uye ine mabasa ekudzivirira nekurapa zvirwere, kuwedzera hutachiona uye kupokana nekukwegura, izvo zvinofarirwa nevaChinese nevatorwa vekunze.
Scorpion waini ine makumi maviri nemaviri amino acids uye akasiyana marate zvinhu, mavitamini, taurine, nezvimwe zvinodiwa nemuviri wemunhu. Iyo haina chepfu uye mhedzisiro pane varwere. Icho chepamusoro-soro chikafu chekuwedzera chekurima chakakodzera vese varume nevakadzi, vakuru nevadiki, uye chinogona kusimbisa muviri. Basa rayo rinogona kusimudzira mashandiro emuviri wemunhu uye basa rezvemuviri munzira mbiri. Iyo ine yakanaka yekurapa mhedzisiro pane hunyanzvi system, cardio cerebrovascular system, chiropa, itsvo uye ganda. Izvo zvakare zvakanaka pakurapa rheumatism uye kurwadziwa kwepafudzi Iyo ine yakajeka mhedzisiro pamapfudzi kuzvimba, kutemwa nemusoro, kumeso kuoma mitezo, kusagadzikana uye kurwadziwa kwepashure kwemadzimai.
Kana chinyavada chichida kushandiswa semushonga, chinofanira kutanga chagadziriswa. Kazhinji kutaura, nzira yekugadzirisa yechinyavada kubvisa tsvina, kugeza uye kuoma. Chitubu kusvika matsutso inguva yakanaka yekutora chinyavada chese. Mushure mekubatwa, isa chinyavada chese mumvura yakachena ndokukachidza kufa, wobva waisa chinyavada chose muhari kuti ubike. Kazhinji kutaura, huwandu hwemvura yatinodira muhari hunongoda kuvhara Scorpion chete.
Wobva waisa munyu mukati. Zvinokurudzirwa kuti yega yega magiramu mazana mashanu echinyavada chose ave nemagiramu emunyu zana nemashanu. Mushure mekunge munyu waiswa mukati, viraira kwemaawa matatu kusvika mana. Kana mvura iri muhari yave kuda kubikirwa, tinogona kuitarisa. Kumusoro. Nzira huru yekutarisa ndeyekusvina muswe kumagumo kwechinyavada nezvigunwe.
Kana chinyavada chese chakabikwa chikagona kuramba chakamira mushure mekunge taminya muswe wacho nezvigunwe, kana musana ukaona muforo, uye dumbu rakatsetseka, zvinoreva kuti chinyavada chese chakagadziriswa, uye tinogona kuchiisa muhari. Bvisa zvinyavada zvese uzviise zvese munzvimbo ine mweya kuti zviome mumumvuri. Kana tichida kushandisa zvinyavada zvese, sukurudza zvinyavada zvese zvakagadzirwa nemvura yakachena uye shandisa munyu.